Qadar ayaa danaha Mareykanka ee Afgaanistaan maarayn doonta sida uu yidhi Blinken. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Qadar ayaa danaha Mareykanka ee Afgaanistaan maarayn doonta sida uu yidhi Blinken.
Qadar ayaa danaha Mareykanka ee Afgaanistaan maarayn doonta sida uu yidhi Blinken.
Mareykanka ayaa Jimcihii ogolaaday in la sameeyo qeybta danaha ee Afgaanistaan ​​oo hoos timaada Qadar, taasoo caawineysa muwaadiniinta Mareykanka ka dib markii ay xidhay safaaraddoodii markii ay Taliban la wareegtay gacan ku haynta dalkaa.
Isagoo dhiggiisa Qadar ku soo dhoweeyay Washington, Xoghayaha Arrimaha Dibadda Antony Blinken waxa uu saxiixay heshiis dhigaya in Qadar ay Mareykanka uga wakiil noqoto Afgaanistaan” xulafadan Khaliijka ah ayaa dhisi doonta qaybta danaha Mareykanka ee safaaradda Kabul.
“Aan mar kale idhaahdo sida aan ugu mahadcelineyno hoggaamintiina, taageeradaada Afgaanistaan, laakiin sidoo kale inaan ogaano in iskaashigayagu uu aad uga ballaadhan yahay taas,” Blinken ayaa u sheegay Wasiirka Arrimaha Dibadda Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.
Dalka Qadar oo uu ku yaalo Saldhig weyn oo uu Mareykanka ku leeyahay ayaa kaalin weyn ka qaadatay diblumaasiyadda iyo daadgureynta labada dal, iyadoo Mareykanka uu soo afjaray dagaalkii 20-kii sano ee u dambeeyay ka socday dalka Afgaanistaan.
Ku dhawaad ​​kala badh 124,000 oo reer galbeed ah iyo Afgaanistaan ​​xulafo la ahaa reer galbeedka ayaa ka dhoofay maalmihii uu sii yaraanayey ku lug lahaanshaha militarigii Mareykanku.
Qadariyiinta ayaa mar sii horeysay marti galiyay wada xaajood u dhexeeya Mareykanka iyo Taliban kaasoo horseeday heshiiskii Febraayo 2020 ee Mareykanka uu ugala baxay ciidamadiisii. Tan iyo markii Taliban ay la wareegeen howlihii safaaradda Mareykanka ee Kabul waxaa loo raray Qadar.
Previous articleLapid wuxuu yidhi Lamaanaha lagu xidhay Turkigu ka mid ahayn hay’adaha Israa’iil.
Next articleMadaxa IAEA ayaa sheegay ‘xidhiidh la’aan yaab leh’ oo ka timid dowladda Iran.